China ipeni ukushisa cindezela umshini ifektri abakhiqizi | Taile
Lo mshini wokushisela umshini wokushisa usetshenziswa kabanzi ezinhlotsheni zamapeni, njengezibaya zepulasitiki, amapeni e-ballpoint, njll. Uyakwazi ukuphrinta ama-logo kwizibaya ezi-6 ngasikhathi sinye, kufakwa izinhlobo ezahlukahlukene zamapeni, ngokwesibonelo, amapeni epulasitiki, amapeni ebhola, njll. Umshini wepeni ungumnikazi we-swing-away ingalo, inzwa yokubala emuva, isibambo esisheshayo kanye nesilawuli sedijithali esimbili sokwenza umsebenzi wokudlulisa ube lula kakhulu.
1. [Ukusetshenziswa kwe-Safein] Ingalo ye-Swing-away yenzelwe ukubeka nokuthatha okuphephile; Isibambi esisheshayo sokusebenza okulula. inqubo yonke yokuphrinta ilula futhi iphephile. Lapho isibambo sengcindezi sivaliwe, izibaya zizolungiswa endaweni yokusebenza ukuze kube nomphumela wokuphrinta ongcono.
2.Take isilawuli se-microprocessor nememori yepharamitha ngokunemba okuphezulu kokulawula, iphaneli yokulawula yokuthinta. Ingaphakamisa nge-360 degrees rotation, kulula ukuthatha izinto futhi idlulise isithombe ezintweni ezikhethekile ezimise ngobukhulu obuthile. Izingxenye ezisemqoka zenziwe ngezinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme, ezizinzile futhi zihlala isikhathi eside. Ukwelashwa ngopende, ibanga elibushelelezi neliphezulu. Ngenxa yokukhiqizwa kwemishini emihle kakhulu, imikhiqizo yesithombe eyenziwe ingcono kakhulu.
3. [Digital smart control] Ithempelesha nesikhathi isilawuli sihlanganiswe kusibonisi esisodwa ukuze kubekwe kalula futhi kubhekwe. Ifakwe iphaneli yokulawula ukuthinta elawulwa uhlelo lwe-microprocessor lwenzwa yokulawula okuphezulu. Inzwa yokubala isetshenzisiwe, ukubeka isikhathi okuzenzakalelayo lapho isibambo sicindezelwe phansi, kuyeka ukubhuza lapho isibambo siphakanyisiwe.
4. [Ikhwalithi eqinile] Izakhi ezisemqoka yizinto zokungenisa ezingaphandle ezingenisiwe futhi indawo iphathwa ngokuqedwa kwe-lacquer okwenza umshini ubushelelezi, uzinze futhi uhlale isikhathi eside.
5. [Ukusebenza kahle okuphezulu] Isetshenziswa kabanzi ngezinhlobo zamapeni, njengezibaya zepulasitiki, izibaya zebhola, njll. Izibaya ezi-6 zingadluliselwa ngasikhathi sinye.
6. [Kulula ukuphatha] Ukubukeka kuyimfashini futhi kuhle, kulula ukukuphatha, futhi akusindi
Isikrini se-7.Touch isibonisi se-LED somshini wokubhaka isigqoko.
I-8.Ngomshini wokushisa we-Silicone ukuvikela ipeni, yenza ukunyathela okushisayo kufaneleke ngokwengeziwe.
Ipeni le-9.Any, akukho sidingo se-sublimation enamathela.
10.Lezi zibaya Umshini wokucindezela ukushisa usetshenziselwa kabanzi izinhlobo zamapeni, njengezipulasitiki zepulasitiki, izibaya zebhola, njll. Kepha izibaya kufanele zingamelana nokushisa.
I-11.I-surface ayi-stick, ivimbela ukushisa kokudluliswa, futhi ayidingi ishidi le-silicone / teflon elihlukile.
10. [Ngemuva kwensizakalo yokuthengisa] Isiqinisekiso sokwaneliseka.Uma nganoma yisiphi isizathu unganelisekile, sicela usazise futhi insizakalo yethu yamakhasimende izokwenza konke okusemandleni ethu ukukusiza.
Uhlobo: Umshini Wokucindezela Ukushisa
Ibanga elizenzakalelayo: ibhukwana
Amandla amakhulu: 350W
Isicelo: iyiphi ipeni impahla, asikho isidingo Sublimation enamathela
Plate Uhlobo: Sublimation umshini
Ubukhulu (L * W * H): 48 * 42 * 37cm
Iwusizo: Amapeni ama-6 ngasikhathi sinye
Indawo yokuphrinta: Izibaya zepulasitiki (ububanzi kusuka ku-8-10mm)
Iphepha: iphepha lokudlulisa ipeni
Umshini wokucindezela wokushisa we-1 x Digital Pen
1 x IsiZulu Incwadi Yomsebenzisi
Langaphambilini umug wokushisa umshini wokucindezela
Olandelayo: Umshini wokucindezela ukushisa weProtale
Ipeni Heat Cindezela
Umshini Wokucindezela Ipeni
Umshini wokucindezela ukushisa wehembe